Hunter: Maitiro Ekutsvaga B2B Bata Email Kero Mumasekondi | Martech Zone
Pane dzimwe nguva dzaunonyatso kuda kungotora email kero kuti ubate waunoshanda naye wausina mubhuku rako rekero. Ndinogara ndichishamisika, semuenzaniso, vangani vanhu vane LinkedIn account yakanyoreswa kune a pachedu chikero chetsamba yemumhepo. Takabatana, saka ndinovatarisa, ndinovadonhedzera email… uyezve usazowana mhinduro. Ini ndichapfuura nepakati pese meseji meseji mawebhusaiti uye mhinduro inozopedzisira… "Ah, ini handimbotarise iyo email kero." Doh!
Hunter: Tsvaga Professional Email Kero
Imwe yakanakisa uye yakapusa mhinduro ndeye muvhimi. Mazuva ese, Hunter anoshanyira mamiriyoni emapeji ewebhu kuti awane data rebhizinesi rinogoneka. Kufanana neinjini dzekutsvaga, vanogara vachichengeta index yewebhu yese uye kuronga data isiri mune chero imwe dhatabhesi.
Hunter inoita kuti uwane kero dzeemail dzehunyanzvi mumasekonzi uye batana nevanhu vane basa nebhizinesi rako. Kuti ushandise Hunter, iwe unongoisa yako domain uye tinya Tsvaga kero dzeemail.
Mhedzisiro yacho inopa maitiro akajairwa emakero eemail pamwe nehuwandu hwenzvimbo iyo email kero yakaonekwa kubva. Iwe unogona kudzvanya pane masosi uye woona kupi uye rini data rakawanikwa:
muvhimi zvakare inogonesa iwe ku:
Tsvaga nemazita - tsvaga nezita rekutanga, rekupedzisira, kana kudomeini kuti uone kana email yemumwe munhu yakanyorwa.
Simbisa email kero - isa email uye uone kuti vanotenda here kana kuti kwete.
Tsvaga munyori - tsvaga email kero dzevanyori kubva pane zvinyorwa zvepamhepo.
Yese yekubatanidza yaunosarudza mairi muvhimi inogona kuwedzerwa kune a lead list uye unogona kutumira inotonhora email mishandirapamwe nekubatanidza yako Google Office kana Microsoft email account. Icho chinhu chikuru sezvo ichinyatso tumira iyo email kubva kune yako email papuratifomu. Iwe unogona kunyange kuvaka yakasarudzika matemplate mairi.
Kana iwe ukanyoresa muvhimi, puratifomu iyi ndeyemahara nekutsvaga kunosvika makumi maviri neshanu pamwedzi.
Tsvaga kero yeemail yehunyanzvi
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we muvhimi uye ndiri kushandisa yavo affiliate link mune ino chinyorwa.
Tags: b2bb2b email kerokuvaka inotonhora email runyorwaVaka runyorwa rweemailkuvaka lead listinotonhora emailinotonhora yekutumira emaildomain email lookupchikero chetsamba yemumhepoemail address domainemail listemail kusvikaemail tarisirotsvaga email kero yemunyoritsvaga email keromuvhimioutreachkero yeemail nyanzvitsvaga nzvimbo ye email kerosimbisa email address